Oovimba be-Forex-Funda ukurhweba
I-GBP / i-USD iqhubela phambili kwi-1.3650 kungakhathaliseki ukuba yiMingcipheko yeDiplomatic, njengoko i-CPI Yandisa iifowuni ze-BoE
tags Forex, IGBP / USD, iindaba
Amaqela e-GBP / JPY ajikeleze i-156.50 kuRhwebo oluzolile ngelixa iBhili yeDatha yase-UK enzima, iNtlanganiso yoMgaqo-nkqubo we-BoJ ekuJonganyeni
I-GBP / JPY idibanisa malunga ne-156 kurhwebo oluzolileyo njengoko ingqwalasela ijika kwi-bill enzima yedatha yase-UK kunye nentlanganiso ye-BoJ.
Imakethi kusenokwenzeka ukuba iqhubeke nokurhweba njengendawo yomdla wehlabathi jikelele womngcipheko weveki.
Emva kokuba imfutshane yawa ngaphantsi kwinqanaba lenkxaso ye-156.00 kunye nokutyelela uphawu lwe-155.50; namava ngolwesihlanu ophelileyo,
I-GBP / JPY ibuyiselwe, ngoku ithengisa malunga ne-156.50 inxalenye enkulu yeseshoni yangoMvulo, malunga ne-0.2% emini. Imiqulu ye-Forex yayincinci kunokuba yayiyiyo ngoMvulo ngenxa yokuvalwa kwemarike yase-US yoSuku lwe-MLK, okubangela ukuba iimeko zokurhweba zingabi namdla.
Ukuchacha okuphawulweyo kubangelwa ikakhulu kukwanda ngequbuliso kumnqweno wehlabathi womngcipheko ngexesha leeveki zokuvalwa kwenyanga ephelileyo.
Njengoko i-Omicron ixhalaba kwaye imarike yaqiniseka ukuba i-BoE yokunyuka kwezinga likaDisemba elingalindelekanga liza kunika ithuba elingakumbi ngo-2022. Nangona kunjalo, ukunyuka kwebhanki ephakathi kwebhanki kunciphise amandla eMelika kunye ne-equities yehlabathi ekuqaleni kuka-2022 ukuxhasa inkxaso ye-yen kwaye njengoko. ukutsala kakuhle kwe-GBP/JPY umva ukusuka kwiindawo eziphakamileyo zamva nje.
Ibhili enzima yedatha yase-UK, kunye nemisebenzi yamva nje, ibalisa ngoLwesibini, amanani okunyuka kwamaxabiso ngoLwesithathu, kunye namanani okuthengisa amva nje ngolwesiHlanu kusenokwenzeka ukuba anike umngcipheko omkhulu kwiponti ukuba unamandla ngokwaneleyo okunceda ukuxhasa izinga le-BoE. ukwanda okulindelweyo. Abarhwebi bafanele bajonge into enokuba yintlanganiso ye-BoJ enomdla ngokumangalisayo namhlanje kuba imithombo inike inkcazo yokuba ibhanki ngoku isebenza malunga nendlela ibhanki enokurhoxisa ngayo ukuvuselela kwiminyaka ezayo ngaphambi kokuba ukunyuka kwamaxabiso kubuyele kwi-2.0% ekujoliswe kuyo kwe-BoJ.
Unokuthenga iingqekembe ze-crypto apha: Thenga iingqekembe.
tags Forex, imali, iindaba
Iponti yaseBritani inamandla ngokuchasene ne-Euro ngoMvulo phakathi kokuNciphisa uloyiko lwe-Omicron
Iponti yaseBritane (GBP) ichukumise indawo yayo ephezulu ngokuchasene ne-euro (EUR) ukusukela ngoFebruwari ka-2020 phakathi kolindelo lokunyuka kwenqanaba lenzala kunye nokunciphisa amaxhala ngenxa yempembelelo yokwahluka kwe-Omicron COVID-19 kuqoqosho.
Abahlalutyi bacinga ukuba iSterling irekhode iinzuzo ezibalulekileyo ukusukela phakathi kuDisemba, ngenxa yokwala kukarhulumente wase-UK ukunyanzelisa izithintelo zokutshixwa okutsha, okuthe kwanika abatyali mali ukomelela kweemvakalelo ezifuneka kakhulu.
IBritane ikhethe ukugxila ekusasazweni kogonyo lwe-booster, olufikelele ngaphezulu kwe-60% yabemi, endaweni yokuyalela ukuba kubuyelwe kumanyathelo okuvalwa.
Ngeli xesha, abatyali-mali baye balindela ngakumbi ukuba iBhanki yaseNgilani inokunyusa inzala ekuqaleni kukaFebruwari, emva kokunyuka kwezinga elingalindelekanga kwinyanga ephelileyo. Ethetha ngale nto inokwenzeka, umhlalutyi we-ING ukhankanya ukuba i-indexed indexed swap (OIS) imarike ye-overnight inexabiso le-80% yamathuba okunyuka kwamanqaku angama-25, wongeza ukuba:
"Sijonge ukukhutshwa kwe-GDP ephucukileyo kaNovemba e-UK ngomso ye-0.4% inyanga nenyanga, ekufuneka igcine ulindelo luphila lokunyuka kweBhanki yaseNgilani nge-3 kaFebruwari."
Iponti yaseBritane iRhweba ngokufanelekileyo ngokuchasene neGreenback ngoMvulo
Kwezinye iindaba, uqikelelo lokuqala lwemveliso yasekhaya yase-UK ngoNovemba imiselwe ukukhululwa ngoLwesibini. Kwakhona, i-GBP okwangoku ithengisa nge--0.11% ngokubhekiselele kwi-greenback kodwa ibambelele kwindawo ephezulu ukusuka ngoNovemba 2021 kwi-1.3599.
Okwangoku, i-EUR / GBP pair ithengiswa phantsi -0.21% kwiseshoni yaseLondon namhlanje, iphantsi kwi-0.8332 ngeveki edlulileyo, inqanaba layo eliphantsi kakhulu ukususela ngoFebruwari 2020. Ngokutsho komhlalutyi weFX e-Argentex, uJoe Tuckey, uSterling wangena kwi-2022. “ngomoya wokuba nethemba; Imarike iya kujongisisa idatha ye-Omicron, kunye naluphi na umqondiso okhawulezileyo weendawo ekugxilwe kuzo nguLiz Truss, njengophawu lwethoni ethathwe yiBhanki yaseNgilani kwi-Q1.
tags Pound yaseBrithani, i-eur, yaqikelelwa, Forex, IGBP, iindaba
Iveki yokuvula ka-2022 yeza nezinto ezothusayo kwimakethi ye-forex kodwa yenza i-dent encinci kwi-euro/dollar pair. Olona loyiko luphawulekayo lweza emva kokuba i-US Federal Reserve, ngokweMizuzu ekhutshiweyo kwintlanganiso yayo kaDisemba, yaphawula ukuba iceba ukucofa iibhondi zayo kwezi nyanga zizayo.
I-US Fed's balance sheet okwangoku iquka malunga ne-8.3 yeetriliyoni zeedola kuNondyebo kunye nezibambiso ezixhaswa yi-mortgage-backed. Imizuzu ifundeka ngolu hlobo: "Phantse bonke abathathi-nxaxheba bavumile ukuba kuya kuba yinto efanelekileyo ukuqalisa i-balance sheet ebaleka ngaxa lithile emva kokunyuka kokuqala koluhlu ekujoliswe kulo kwireyithi yemali yomanyano."
Ibhanki ye-apex nayo yayikholelwa ukuba iimeko zokunyuka kwesantya zivuthiwe kwaye zingenza ngokufanelekileyo kwiinyanga ezizayo ukuba isantya sokubuyisela kwimarike yezemisebenzi sigcina i-trajectory yangoku. Nangona kunjalo, imarike ifumene ukukhululwa kwe-Nonfarm Payroll embi kakhulu kunokuba bekulindelwe ngoDisemba ka-2021. Idatha yabonisa ukuba uqoqosho lwase-US lwenze imisebenzi emitsha ye-199,000 ngoDisemba, isiqingatha sento abahlalutyi balindele.
Kwelinye icala, iNqanaba lokungaSebenzi liphume lingcono kunoko belilindelwe, lifumana ikhontrakthi ukuya kwi-3.9% ukusuka kwi-4.2% kwinyanga ephelileyo. Ngelixa abaninzi bengazange bayibone le datha njengento ekhethekileyo okanye efanelwe yingqalelo, iFed yayibona ilungile ngokwaneleyo.
Izithuba zeedola zokuBuyisa kwakhona okusempilweni Phakathi kweDokethi yoQoqosho eNgcono yase-US
Ngeli xesha, imizuzu kaDisemba ibonise ukuba abenzi bomgaqo-nkqubo baxhalabile kakhulu malunga nesantya sokunyuka kwamaxabiso esizwe kunokuba bayekile ukusabela kwisivuno sebhondi karhulumente. Oko kwathiwa, le ngxelo ibangele umonakalo omkhulu kwiWall Street njengoko idola (iGreenback) ifumene kwakhona kakhulu kwilahleko yayo yangaphambili. Idatha ye-NFP iphinde yafaka uxinzelelo lwe-bearish kwi-equities front, iphakamisa ngakumbi idola.
Kwezinye iindaba, i-Eurozone inflation igcine i-trajectory ephezulu njengoko inyuke nge-5% YoY ngoDisemba, inqanaba layo eliphezulu kwirekhodi kuba lirekhode i-4.9% kwiinyanga ezidlulileyo.
tags IDOLI, YeEUR / USD, Forex, iindaba, I-US Fed
I-Yen ijongene nobuthathaka kwiBhodi yonke njengoko abaTyali-mali bekhulisa umngcipheko wokutya
I-yen yaseJapan iye yehla yaya kwiponti yaseBritane kwiseshini yokuqala yaseYurophu ngoLwesine, njengoko i-GBP/JPY iye yanda phakathi komdla wokutya womngcipheko kubatyali-mali.
Imbonakalo yomtyali-mali iza phakathi kweemvakalelo eziphuculweyo zentengiso njengoko oorhulumente berhoxa ekuphumezeni izithintelo ezitsha zokutshixwa, ngaphandle kokunyuka kokusasazeka kokwahluka kwe-Omicron. Idatha yamva nje evela kwiReuters ibonisa ukuba iimeko zehlabathi ze-COVID-19 zifike phezulu kakhulu kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo.
Ukuphawula ngophuhliso, umhlalutyi ophezulu weemarike kwi-Asia Pacific e-Oanda, uJeffery Halley, waphawula ukuba:
“Iimarike ziyaqhubeka ukuxabisa ukugqiba uloyiko lwe-Omicron ngenxa yokulaliswa esibhedlele okuphantsi. Oko kukhuthaze abatyali-mali ukuba baphume kwindawo yokuzikhusela kwaye babuyele kurhwebo lokubuyisela umhlaba. ”
Ubuthathaka beYen yaseJapan ngenxa yokuFudukela kwi-Offshore yeMali: Umhlalutyi we-Oanda
I-JPY nayo yawa ngokuphawulekayo kwidola, njengoko isondele kwinyanga edlulileyo kwi-115.52, iminyaka emihlanu ephezulu. Umhlalutyi we-Oanda uphinde waqaphela ukuba ubuthathaka be-yen buvela kubatyalo-mali baseJapan abathumela imali ngaphandle kolwandle.
Okwangoku, i-GBP ithinte irekhodi eliphezulu le-1.3505 ngaphambili namhlanje malunga ne-greenback, njengoko irekhoda indawo yayo ephezulu kwiiveki ezintandathu. Ngakolunye uhlangothi lwehlabathi, i-dollar yase-Australia enobungozi yenyuka phezulu ukuya kwi-0.7272 izolo kodwa ithengiswa kwipatheni yecala ngokuchasene ne-GBP malunga ne-1.8560.
Ukuhamba okuvela kwiimpahla ezikhuselekileyo ezifana ne-yen ukuya kwi-riskier assets kunokubonwa kwi-spike kwi-S & P 500 kunye ne-Dow Jones Industrial Average, njengoko zombini izalathisi zivaliwe kwirekhodi elitsha izolo.
tags uhlalutyo, Forex, iindaba, yen
I-Turkey kulindeleke ukuba irekhode i-30% yokunyuka kwamaxabiso ngoDisemba phakathi kwe-Plummeting Lira
Ngokwe-poll yeReuters, i-economists ilindele ukuba ukunyuka kwamaxabiso ngonyaka kweTurkey kubethe i-30.6% ngoDisemba. Ukuba oku kuyenzeka, iya kuba sisihlandlo sokuqala ukunyuka kwamaxabiso elizwe ukophula i-30% ukusukela ngo-2003, njengoko amaxabiso ezinto enyuka ngenxa yokuguquguquka okukhulu kweLira.
Uqikelelo oluphakathi lwe-30.6% luvela kwiqela leengcali zezoqoqosho ezili-13 ezinoqikelelo oluphakathi kwama-26.4% ukuya kuma-37.3%.
Kakade, iTurkey ihlupheke kumazinga aphezulu okunyuka kwamaxabiso malunga ne-20% kwiinyanga ezidlulileyo ngenxa yokuwa kwe-Lira ukurekhoda i-lows, kulandela i-500 ye-bases slash yi-bhanki ephakathi ngoSeptemba.
Okwangoku, uqikelelo lokunyuka kwamaxabiso enyangeni ngenyanga lufike kwi-9%, kunye noqikelelo oluphakathi kwe-5.5% ukuya kwi-14.6%.
Abasemagunyeni eTurkey babanga ukuba izinto ezibangela ukuhla nokunyuka kwamaxabiso ezinto zexeshana elifutshane
IBhanki ePhakamileyo yeRiphabhlikhi yaseTurkey (CBRT) isanda kuqinisekisa ukuba izinto zexeshana zibangele ukunyuka kwexabiso lentengo kwaye yaphawula ukuba ukunyuka kwamaxabiso kunokunyuka kakhulu kwixesha elifutshane.
Ukuwa kweLira kunyuke kakhulu nge-50% ngoMvulo odlulileyo emva kokuba uMongameli Tayyip Erdogan ebhengeze isikimu sokukhusela iidiphozithi ze-lira ngokuchasene nokuguquguquka kunye nesithembiso songenelelo lwentengiso oluxhaswa ngurhulumente.
I-Turkey iye yagcina ukunyuka kwamaxabiso okuphindwe kabini kwisithuba seminyaka emine, nto leyo eye yatshabalalisa imivuzo ye-Turkey kunye nenkxaso ka-Erdogan. I-Turk-Is imanyano yabasebenzi yaqaphela ukuba ixabiso lokutya linyuke nge-25.75% ye-MoM ngoDisemba, yongeza ukuba imele ukunyuka kwaminyaka yonke kwe-55%, ukunyuka okuphezulu kokunyuka kwamaxabiso okutya ukususela ngo-1987.
Okunika umdla, uqikelelo lokuphela konyaka lokunyuka kwamaxabiso e-CBRT lube yi-18.4% kwingxelo kaOktobha. Kwakhona, urhulumente uqikelele ukuphela konyaka kwamaxabiso nge-16.2% ngo-2021.
tags Forex, I xabiso, Lira, iindaba, IKARIKUNI
I-GBP / i-USD iPhezulu kwiiveki ezintlanu eziphezulu phakathi kweDola ebuthathaka
I-GBP / i-USD ibini ithengise ithoni ethule kwiseshoni yokuqala yaseYurophu ngoLwesibili emva kokurekhoda i-spike ukuya kwiiveki ezintlanu eziphezulu kwi-1.3448 ngaphambili namhlanje.
Ikhebula isokole ukwakha phezu komgangatho ophakamileyo ukusuka kusuku olungaphambili kwaye yahlala yoyiswe kuluhlu phakathi kokungabikho kwemali ngenxa yeeholide e-US nase-UK. Okwangoku, i-greenback yaqhubeka ibonisa amandla emva kweengxelo ze-hawkish ezivela kwi-US Federal Reserve, eyenze ngokuchasene nokunyuka okungahambi kakuhle kwi-GBP / USD pair.
Oko kuthethiweyo, ukuhla kwezivuno ze-US Treasury bond kudityaniswe noloyiko oluhlayo ngenxa yefuthe loqoqosho lokwahluka kwe-Omicron kuthintele nakuphi na ukungena okunentsingiselo kwi-USD ekhuselekileyo. Ngaphaya koko, iingxelo ezikhuthaza ukuzithemba kuhlobo olutsha lwe-COVID-19 oluxhasa inkxaso ye-Sterling, eyongeza kwi-GBP/USD pair.
Iinkunzi ze-GBP/USD eziNtuweyo zizinto eziSisiseko
Ukuqhubela phambili, unobhala wezempilo wase-UK uSajid Javid kutshanje ubhengeze ukuba ilizwe alinakwenzeka ukuba lizise ezinye izithintelo ngaphambi koNyaka oMtsha. Oku kuthethwa, kudityaniswa nento yokuba ukwahluka kwe-Omicron kunokungabulali njengokuba bekusoyikwa ngaphambili, konyuse ithemba labatyali-zimali.
Nangona kunjalo, izinto ezisisiseko zixhasa kakhulu iPondo eyomeleleyo ngokuchasene neDola kwaye kufuneka inyuse ixabiso le-GBP/USD ngababini kwixesha elikufuphi. Nangona kunjalo, iinkunzi zeenkomo zingahlala zisecaleni de kube kubonwa ukuqinisekiswa kokuqhambuka ngaphezulu kwe-1.3500 ephezulu kwiintsuku ezizayo. Oku kufuneka kube kukulinda ixesha elide kuthathelwa ingqalelo ukungabikho kwedatha yezoqoqosho eshukumayo kule veki, njengoko ihlabathi lithatha ikhefu phambi kwemibhiyozo yoNyaka oMtsha.
tags uhlalutyo, Forex, IGBP / USD, iindaba